सर्पले टोक्यो? के गर्ने, के नगर्ने ? – दैनिक नेपाल न्युज
आज हामी तपाईंले सर्पले टोकिहालेको अवस्थामा तुरुन्त अपनाउनुपर्ने तरिकाबारे यहाँ जानकारी दिँदै छौं । सर्पको विष तीन प्रकारका हुन्छ । यसमा हिमोटोक्सिक, न्यूरोटक्सिक र मायोटक्सिक समावेश छन् । हिमोटोक्सिकः यसले रक्त कोशिकामा आक्रमण गर्दछ । शरिरमा थुप्रै स्थानबाट रक्तश्रावको लक्षण र रगतको बान्ता ।
सर्पले टोक्दा अपनाउनुस् यी घरेलु उपायःसुई निकालिएको इन्जेक्सन लिएर टोकेको स्थानबाट रगत तान्नुहोस् । यसलाई ५ देखि ७ पटक दोहोराउनुहोस् । घाउलाई चिसो पानीले पखाल्नुहोस् । सर्पले टोकेको स्थानमा कागतीको रसले पखाल्नुहोस् ।
यसले संक्रमणको खतरा कम हुन्छ ।
चिसो माटोको पट्टी बनाउनुहोस् र त्यसलाई टोकेको स्थानमा राख्नुहोस् । यसलाई हरेक १० मिनेटमा परिवर्तन गर्नुहोस् । घाइतेलाई सुत्न नदिनुहोस् । दुधमा गाइको घ्यु मिसाएर घाइतेलाई पिउन दिनुहोस् । लसुनको पेष्टमा मह मिसाएर चटाउँदा पनि संक्रमण कम हुने गर्दछ । मूलाको पात रगढ्दा जलन कम हुन्छ ।